49 အဘို့ရလဒ် doraemon
Doraemon ၏သူငယ်ချင်းများ: Nobita, Shizuka, Dorami, တံခါးကိုနောက်ကွယ်မှဘယ်နေရာမှာမဆို Jaian ပုန်းခို, သငျသညျ Doraemon ဖမ်းပြီးသငျသညျအထဲကရှာတွေ့ကူညီပေးသည်မမှန်ကန်ကြောင်းသို့မဟုတ်အချိန်ထဲကကိုတွေ့လျှင်, ကြွက် Doraemon ဖမ်းမည်သူ,
nobita နှင့် doraemon စက္ကူပစ်ချ
Nobi Nobita doraemon နှင့်အတူစက္ကူ Toss ဂိမ်းကစားနေသည်။ သူကဘယ်လိုကတိကျမှန်ကန်ပစ်ခတ်နိုင်သလဲ ကြည့်ကြရအောင်!
Doraemon Nobita, Gian နှင့် Shizuka အသစ်အဆင့်ဆင့်သော့ဖွင့်ဖို့ပထမဦးဆုံးဌာန၌အဆင့် Racing နှင့်ဖြည့်စွက်ရန် Doraemon သို့မဟုတ်အခြားဇာတ်ကောင်ကို select လုပ်ပါသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆန့်ကျင်ပြိုင်ကားဖြစ်ပါတယ်
doraemon jaian ပြေး
သငျသညျသင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့နှင့်ဂိမ်းကျော်ထဲသို့ကျချင်ကြဘူးလျှင်သတိထားပါ, Jaian မှ Doraemon ထွက်ပေါက်ကိုကူညီပါ။ သင်ခုန်ဖို့ space bar ကို အသုံးပြု. အဆင့်မြင့်ရမှတ်ရကြလိမ့်မည်, ဝေးကို run ထားဖို့လိုပါမယ်။
အကူအညီ doraemon, shizuka, nobita အချီပြီးကားမောင်းအပေါင်းတို့နှင့်အတားအဆီးသွားစမ်းပါ။ ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်အဘို့အတိုဆုံးအချိန်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်ဖြည့်စွက်။
နောက်ကျောတစ်ဦးတံတား-blasting ထိုက်သောအပြစ်အလျောက်နှင့်အတူ! ဗျူဟာမြောက်ရန်သူအပေါ်အများဆုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစီရင်ဖို့ဒိုင်းနမိုက်ထားပါ။ အသီးအသီးသည့်အဆင့်လွန်ဖို့သင့်ဖျက်ဆီးခြင်းပစ်မှတ်ရောက်ရှိ။
ငါ့ရေအွန်လိုင်းသည်အဘယ်မှာရှိနာမည်ကျော် iPhone နှင့် Android ဂိမ်း Play! ရေသည်အတူးနှင့်ရွှံ့ဗွက်ရေထဲမှာရေချိုးခန်းယူမှမိကျောင်းကိုကူညီပေးပါတယ်။
မာရီယိုကွင်းဆက်များကဖွင့်သော့ခတ်ထားလျက်ရှိသည်သူကိုစောင့်ရှောက်အ Bowser မိကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ မာရီယိုရည်မှန်းချက်သူတို့အားလုံးကိုသတ်ပစ်ရန်သူတို့အားနဂါးမှာအမြောက်များနှင့်မီးသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကွင်းဆက်ထိကြဘူးသို့မဟုတ်အခြားသူတို့အားမိကျောင်းလွတ်မြောက်ရန်ပါလိမ့်မယ်။